မနာလိုစိတ် – Grab Love Story
“ သား…သား….သားရေ…” “ ဒုန်း…ဒုန်း…ဒုန်း…..သား..သားရေ..” တံခါးကို တဒုန်းဒုန်းထု၍ အော်နှိုးနေသော သူ့အမေအသံကြောင့် ထွန်းထွန်း ဖျတ်ခနဲ လန့်နိုးလာသည်။ “ ဗျာ… မေမေ…လာပြီ… လာပြီ….ခဏ ” ထွန်းထွန်း အိပ်ရာက ဗြုန်းခနဲထလိုက်ပြီး မွေ့ယာဘေးတွင်ရှိသော အရက်ပုလင်းကို ကပျာကယာ ကောက်ကိုင်လိုက်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်မည်အပြု မွေ့ယာခြေရင်းတွင် အတွင်းခံဘရာစီယာ တစ်ထည်ကို တွေ့လိုက်၍ ကုန်းကောက်လိုက်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲသို့ ခပ်သွက်သွက် ဝင်လာခဲ့သည်။ အရက်ပုလင်းနှင့် ဘရာစီယာကို ဘီရိုအောက် ထိုးသွင်းလိုက်၏။ ပြီးတော့ မွေ့ယာနား သွားပြီး သိမ်းစရာရှိ မရှိ ကြည့်လိုက်၏။ စိတ်ချရတော့မှ .. တံခါးချက်ကို ဖွင့်လိုက်၏။ သူ့အမေ မျက်နှာ မကောင်းသည်ကို အကဲခတ်မိ၍… “ မေမေ… ဘာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ ..ဟင်…” သူ့အမေက တံတွေးတစ်ချက် မျိုချလိုက်ရင်း… “ တင်ရီမ ဆုံးပြီ … သားရေ…” “ ဗျာ… ဘယ်…ဘယ်တုန်းကလဲ…မေမေ…” ထွန်းထွန်း တစ်ကိုယ်လုံး မိုးကြိုးပစ်ခံလိုက်ရသလို တုန်လှုပ်ခြောက်ချား သွားသည်။ ခေါင်းနပန်းကြီးသွားပြီး ကြက်သီးမွှေးညှင်းတွေ ဖျင်းခနဲ ထသွားသည်။ “ မနက် ၆ နာရီလောက်ကလို့ ပြောတဘဲ ..မေမေလဲ ကျောင်း အာရုံဆွမ်း သွားပို့ရင်း အပြန် တင်ရီမတို့ အိမ်ဖက် လှည့်လာတာ လူတွေ အုံနေတာနဲ့ ဘာဖြစ်တာလဲ ဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ တင်ရီမ ဆုံးပြီ ဆိုတာ သိရတာပဲ သား..။ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ သားရယ်.. မနေ့ကတောင်မှ အိမ်ကိုလာသွားသေးတာ… အင်း…နှုတ်ဆက်သလို ဖြစ်သွားတာပါပေါ့လေ…အင်း…သေခြင်းတရား…သေခြင်းတရား….” ထွန်းထွန်း အိမ်ပေါ်က ကဗျာကယာဆင်းပြီး မျက်နှာခပ်သွက်သွက်သစ်ကာ မတင်ရီမတို့ အိမ်ဖက် ပြေးထွက်ခဲ့တော့သည်။ တစ်လမ်းလုံးလည်း ဘာကိုမှမမြင်..။
မတင်ရီမ မျက်နှာကိုသာ မြင်ယောင်လျက် ရှိသည်။ မနေ့ညက သူနှင့် မူးမူးမေ့မေ့ အတွေ့ ကာမအရသာကို နှစ်ဦးသဘောတူ မြူးတူးခံစားခဲ့ကြသော မတင်ရီမ…အခု ဆုံးပြီတဲ့…။ ထွန်းထွန်းရင်ထဲ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှု မီးတောင်ကြီး ပေါက်ကွဲနေသည်။ မျက်ရည်တွေလည်း စီးကျနေ၏။ ကျောက်ခဲနှင့် ခလုတ်တိုက်ကာ သူ့ခြေမတစ်ခုလုံး ပူခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ “ အား……..” မျက်လုံးကို အားယူဖွင့်ကြည့်လိုက်၏။ သူ့နှုတ်က ဟာခနဲ အသံထွက်သွား၏။ ဟူးခနဲ သက်ပြင်းရှည်ကြီး မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။ “ ဟား…တော်ပါသေးရဲ့… အိပ်မက် မက်နေတာပါလား…” သည်တော့မှ ရင်ထဲက အလုံးကြီး ကျသွားသည်။ အမှန်တော့ အိမ်မှာမွေးထားသော ကြောင်လေးနှစ်ကောင်က အပေါ်ထပ်မှာ သူနှင့်အိပ်၏။ အောက်ဆင်းချင်၍ သူ့ခြေမကို ကိုက်၍နှိုးနေခြင်းဖြစ်၏။ တစ်ကောင်ကမူ တံခါးဝကို ခေါင်းနှင့် ဆောင့်တွန်းနေသည်။ ထို့ကြောင့် တဒုန်းဒုန်း အသံမြည်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ အရက်ပုလင်းနှင့် ဘရာစီယာကို အိပ်မက်ထဲမှာ စွဲနေတာက မတင်ရီမနှင့် သူတို့ ကာမဆန္ဒလည်းပြည့်ဝ ၊ လက်ဖွဲ့အစီအမံကိစ္စလည်း ပြီးဆုံးချိန်မှာ အတော်လေး မှောင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ မတင်ရီမ အန္တရာယ် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနှင့် ခြံထဲက ထွက်နိုင်ရန် သူ့အမေကို ဖယောင်းတိုင်ဝယ်ခိုင်းပြီး ပထုတ်လိုက်သည်။ တောဆိုသည်က မြို့လို လျပ်စစ်မီး ရှိတာမဟုတ်..။ ရေနံဆီမီးခွက်နှင့် ဖယောင်းတိုင်ကိုသာ အားကိုးရ၏။ တတ်နိုင်သူတို့သာ ဘက္ထရီမီးကို သုံးနိုင်သည်။ ဘက္ထရီမီးကလည်း အိမ်တွင်းမှာသာ ထွန်းလေ့၇ှိရာ အမှောင်ဝင်စပြုပြီမို့ နေဝင်တာနှင့် အမှောင်ဓါတ်က ကြီးစိုးလာတော့၏။ “ မမ….လာလာ…အိုကေပြီ….” “ လစ်တော့….” မတင်ရီမလည်း ထမီနှင့်အင်္ကျီကို ကပျာကယာ ကောက်ဝတ်ရင်း ခပ်သွက်သွက် ဆင်းခဲ့သည်။ နောက်က ကပ်လိုက်လာသည့် ဖုတ်ပူမီးတိုက် ကမန်းကတန်းမို့ အတွင်းခံဘရာစီယာ မွေ့ယာပေါ် မေ့ကျန်ခဲ့သည်။ နှစ်ယောက်သား ခြံပေါက်ဝရှိ သရက်ပင်အုပ်အုပ်ကြီးအောက်မှာ မှောင်ရိပ်ခိုပြီး ဖက်နမ်းနေကြ၏။ မတင်ရီမလက်နှစ်ဖက်က ထွန်းထွန်းလည်ပင်းကို ယှက်သိုင်း၍ ဟီးလေးခိုထား၏။ ထွန်းထွန်းလက်တစ်ဖက်က မတင်ရီမ ခါးကိုဖက်ရင်း ကျန်တစ်ဖက်က သူ့ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်သပ်ပေးနေ၏။ “ မမ…ပါးမော့လေ….” “ ပြွတ်…ပြွတ်……ပြွတ်……” “ အိုး…အိုး….တော်…တော်အုံးကွာ… မပြန်နိုင်ဘဲ နေအုံးမယ်….” ထွန်းထွန်းက သူ့အမေပြန်အလာနှင့် တိုးမည်စိုး၍ အနမ်းရပ်၍ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုတ်ညှစ်လိုက်သည်။ အင်္ကျီအပါးစမို့ နို့ကိုင်လိုက်ရသည်မှာ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ထိထိမိမိ ရှိလှသည်။ ပယ်ပယ်နယ်နယ် ပွတ်ရင်း …သည်တော့မှ အတွင်းခံဘရာစီယာ မပါမှန်း သိရတော့သည်။ “ မမ…အတွင်းခံလဲ ဝတ်မလာဘူး….” “ အဲ…တော့……အင်းဟင်း…ဒုက္ခပဲ…” “ ညပဲဗျာ… ဒီအတိုင်းသွားတော့… ပြန်ယူနေရင် မေမေနဲ့ တိုးနေလိမ့်မယ်…၊ ကျနော် သိမ်းထားလိုက်မယ် နော်….” “ အင်းအင်း… အခုမှ အေးမှန်း သိတော့တယ်နော်… အအေးပတ်ပြီး သေ၇င် သရဲဘဝနဲ့ နင့်ကို ဂုတ်ချိုး သတ်ပစ်မှာ သိလား…” “ အောင်မာ… အဲဒီသရဲမကို ဟောဒီလို လုပ်ထည့်လိုက်မှာပေါ့… မမရ…” ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမ ထမီကို ပင့်လှန်ပြီး စောစောကပင် ပယ်ပယ်နယ်နယ် လိုးထားသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကုတ်ထည့်လိုက်သည်။
“ အယ်….ကျွတ်…. စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး ကျိန်းနေရတဲ့ အထဲ…..” မတင်ရီမလည်း ထွန်းထွန်း လီးကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်သည်။ “ အား….အာ….အ…နာ…နာတယ် ..ဗျ….” ထိုအကြောင်းအရာလေးများကို စိတ်စွဲ၍ မက်ကြောင်း တဖြည်းဖြည်း စဉ်းစားမိတော့မှ ရင်ထဲမှ အပူငွေ့တွေ ကင်းစင်သွားရတော့သည်။ အိပ်မက်က ထွန်းထွန်းအပေါ် တော်တော် လွှမ်းမိုးသွားသည်။ မတင်ရီမဆီ သွားချင်စိတ်တွေ ပြင်းပြလာ၏။ ထို့ကြောင့် အောက်ထပ်ဆင်းပြီး မျက်နှာသစ် ရေချိုးရန် တံခါးဖွင့်လိုက်သည်။ သည်တော့မှ ထွက်ချင်လွန်း၍ ဒေါပွနေသော ကြောင်နှစ်ကောင်မှာ အောက်ထပ်သို့ ပြေးဆင်းသွားတော့သည်။ မျက်နှာသစ် ရေချိုးပြီးနောက်…. “ မေမေ ….. သား မတင်ရီမတို့အိမ်… ခဏသွားအုံးမယ်…” “ ထမင်းကြော် စားသွားလေ သားရဲ့….” ထွန်းထွန်း အမေက ဟင်းအိုးပြင်ရင်း လှမ်းပြော၏။ “ တော်ပြီ မေမေ… ဗေဒင်ဟောခအဖြစ် မမကို ကျွေးခိုင်းရမလား….” ထွန်းထွန်းအမေက ဘာမှမပြောတော့ပဲ သားကို ပြုံးကြည့်နေသည်။ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် သူဝတ်ထားသော အင်္ကျီအတွင်းဝယ် မတင်ရီမ၏ အတွင်းခံဘရာစီယာကို ဝှက်ကာ ယူလာခဲ့သည်။ ထွန်းထွန်းရောက်သွားချိန်ဝယ် မတင်ရီမက သူ့တပည့်မတွေကို ချုပ်ရမည့် အင်္ကျီပုံစံများ အတိုင်းပေးနေ၏။ ထွန်းထွန်း ဝင်လာတာကို မတင်ရီမ မမြင်..။ “ မမ…..” “ ဟင်….ငါးပိချက်….” ထွန်းထွန်းကို မြင်လိုက်တော့ မတင်ရီမ မျက်နှာသည် လပြည့်ဝန်းကြီးကဲ့သို့ ဝင်းထိန်သွားပြီး ကြည်နူးရိပ်တွေ ယှက်သမ်းသွားသည်။ “ မမ…ဒီမှာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း… ပါလာတယ်.. ပြီးရင် အပေါ်ထပ်လာခဲ့တော့….” “ အေး…အေး…….” ထွန်းထွန်း သူ့ကို အကွက်ဆင်၍ ခေါ်သွားမှန်း သိလိုက်သည်။ သူ့ဆီမှာ ဘယ်တုန်းကများ ဗေဒင်မေးဘူးတာ ကျနေတာဘဲ..။ မတင်ရီမ စိတ်ထဲ ကြိတ်ပြုံးလိုက်ရင်း သူ့တပည့်မများကို ပြစရာရှိတာ ပြ၍ မှာစရာရှိတာ မှာပြီး အိမ်ပေါ်ထပ် တက်လာခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်ချောက သူ့အခန်းထဲ ဝင်နေပုံရသည်။ မတင်ရီမက အဝင်တံခါးမကြီးကို ဂျက်ထိုးပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ..အခန်းထဲ ဝင်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမ ကုတင်ပေါ်တွင် ခြေတွဲလောင်းချထိုင်ရင်း ပြုံးဖြီးဖြီး မျက်နှာပေးဖြင့် လက်နှစ်ဖက်ကို ရှေ့သို့ ဆန့်တန်းထားလိုက်သည်။ မတင်ရီမက အပြေးတစ်ပိုင်းဖြင့် ဝင်လာရင်း ထွန်းထွန်းရင်ခွင်ထဲ ရောက်လာသည်။ နှစ်ယောက်သား တင်းနေအောင် ပွေ့ဖက်ထားကြသည်။ “ သိပ်ချစ်တာပဲ… မမရာ….” “ ဟွန်း….မပိုပါနဲ့…….” ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမကို လွတ်ထွက်သွားမှာ စိုးသည့်အလား တအားကြုံးဖက်ထား၏။ “ အင့်….အွန့်…..အင့်….လွှတ်စမ်းပါအုံး ..မောင်လေးရယ်… ဒီမှာ အရိုးတွေ ကျိုးကုန်ပါအုံးမယ်… တကထဲ….” ထွန်းထွန်းက ဖက်ထားသော အရှိန်ကို လျှော့လိုက်သည်။ သို့သော် လုံးဝ မလွှတ်သေး..။ “ မမကရော.. မောင်လေးကို ချစ်လား…ဟင်……” “ ဟင့်အင်း…ချစ်ပါဘူး….” “ ဟာဗျာ… မမကလဲ… ချစ်တယ်လို့ ပြောပါ…” “ အို……မချစ်ပါဘူး ဆိုမှ……” ထွန်းထွန်း မုန့်တောင်းသလို ဇွတ်ချစ်ခိုင်းနေ၏။ စောက်ဖုတ်တစ်ခုလုံး သူထင်သလို ဖွတ်ဖွတ်ကျေအောင် လိုးလို့အားရမှ ချစ်သလားလို့ မေးနေတဲ့ ထွန်းထွန်းကို စိတ်ထဲ ခပ်ချဉ်ချဉ် ဖြစ်လာသည်။ “ မမ… မောင်လေးကို တကယ် မချစ်ဘူးလား…ပြော…..” ထွန်းထွန်း မျက်နှာက တကယ်တည်နေသည်။ မကျေနပ်ရိပ်တွေ ယှက်သမ်းနေသည်။ မတင်ရီမက ထွန်းထွန်း မျက်လုံးတည့်တည့်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း…. “ မချစ်ဘဲနဲ့ မင်းလိုးချင်သလို လိုးတာခံရအောင် ငါက ကြေးစားဖာသည်မှ မဟုတ်တာပဲ… တဏှာရူးလေးရဲ့…” “ ဒါဖြင့် …. ချစ်တယ်ပေါ့…” “ မသိဘူးကွာ… ဂျပန်ဝက်အူ ကျနေတာဘဲ….” ထွန်းထွန်း တအားပျော်သွားပြီး… မတင်ရီမကို ခုတင်ပေါ် ပွေ့လှဲသိပ်လိုက်သည်..။
မတင်ရီမ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ် အုပ်မိုးပြီး သနပ်ခါးအဖွေးသားနှင့် အလှကြီးလှနေသော မျက်နှာကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် အထပ်ထပ် အဖန်ဖန် နမ်းရှုတ်လိုက်၏။ မတင်ရီမတစ်ယောက် အသဲတွေ အူတွေ ယားထသွား၏။ သူကလည်း ထွန်းထွန်းကို တင်းနေအောင် ပြန်ဖက်ထားပါသည်။ ထွန်းထွန်းက နမ်းရှုတ်နေရာမှ မျက်နှာချင်းခွာလိုက်ပြီး မတင်ရီမကို တစိမ့်စိမ့် ကြည့်လိုက်သည်။ အချစ်နှင့် ရမ္မက် ရောယှက်ထားသော မျက်လုံးတို့ဖြင့် စိမ်းစိမ်းကြီး ကြည့်နေသော ထွန်းထွန်းအကြည့်ကို မတင်ရီမ ရင်မဆိုင်ရဲဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ရှက်သွေးဖျန်း၍ မျက်နှာတစ်ခုလုံး နီမြန်းနေသည်။ အရှက်နှင့် ရမ္မက် ရောယှက်နေသော မျက်နှာနီနီလေးက ထွန်းထွန်းစိတ်ကို ကြွသထက်ကြွအောင် ကလိဆွနေသည်။ နှစ်ယောက်သား ရင်ခုန်သံတွေ မြန်ဆန်လာပြီး ရမ္မက်သွေးတွေ ပူနွေးလာသည်။ နှုတ်ခမ်းအစုံကို နမ်းစုတ်ပြီးနောက် လည်တိုင်ကျော့ကျော့ကို လျှာဖြင့်ယက်ပေးလိုက်သည်။ “ ပြက်…ပြွတ်…. ပြွတ်….ပြတ်….ပြွတ်…….” “ အဟင့်…. အင့်…. အဟင့်….ယား….ယားတယ်…လို့…….” နို့အုံတင်းတင်းမို့မို့ကြီးကို အင်္ကျီပေါ်မှ အုပ်မိုး၍ ဆုပ်ကိုင်ပွတ်ချေလိုက်ပြန်သည်။ အတွင်းခံ ဝတ်မထားသဖြင့် ဆုတ်ချေရသည်မှာ ထိထိမိမိ ရှိလွန်းလှပါ၏။ ထွန်းထွန်း စိတ်တွေက ဆင်ရိုင်းတစ်ကောင်လို တစ်စတစ်စ ရာဂမုန်ယိုလာပါသည်။ သူကိုယ်တိုင် ဖော်စပ်ထားသော ကာမအားတိုးဆေးနှင့်လီးကြီးအကြောသန်ဆေးတို့က အစွမ်းသတ္တိ ပြနေပါပြီ..။ မည်မျှလိုးလိုး အားသစ်အင်သစ်တွေ တိုးမြဲတိုးနေသည်။ နဂိုမူလကပင် ကြီးထွားတုတ်ရှည်နေသော လီးတန်ကြီးမှာ အစွမ်းထက်သော လိမ်းဆေးကြောင့် အကြောအပြိုင်းပြိုင်း ထကာ သံမဏိချောင်းကြီးကဲ့သို့ တင်းတောင့် မာကျောလာနေ၏။ ထွန်းထွန်းက မတင်ရီမ၏ စပို့ရှပ်အပျော့စား အင်္ကျီကို မချွတ်လိုက်၏။ ဝင်းအိပြူးပြောင် မို့မောက်နေသော နို့အုံဖွေးဖွေးကြီးက ထင်းခနဲ လင်းခနဲ ပေါ်လာ၏။ ဝိုင်းဝန်းမို့မောက် စူတင်းနေသော နို့အုံထိပ်ဖျားရှိ မစူတစူ နို့သီးခေါင်းလေးကို လက်မလက်ညှိုးနှင့် ဆွဲညှစ်ကာ အသာအယာ ပွတ်ချေ လှိမ့်ဆွပေးလိုက်သည်။ နို့သီးခေါင်းနီညိုလေးက ပို၍စူကြွလာပြီး မတင်ရီမ ရင်ဘတ်ကြီး ကော့ကော့တက်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက ပြေလျော့နေသော ထမီအောက်စကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်ရာ ဖြူဖွေးသော ပေါင်တံတုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး နှစ်ချောင်း၏ အရင်း ခွအုံကြားရှိ ခုံးမို့ဖောင်းကြွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ ဘွားခနဲ ပေါ်ထွက်လာသည်။ တွန့်လိမ်မဲချိတ်နေသော စောက်မွှေးအုပ်အုပ်ကြီး အောက်ရှိ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ အဆီတဝင်းဝင်း ထနေသည်။ နီညိုရောင်သမ်းနေသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ထူထူကြီးနှစ်လွှာက ဘေးသို့ပြဲလန်နေပြီး နီနုသော အတွင်းသားတွေက စောက်ရည်ကြည်တို့ဖြင့် စိုလက်တောက်ပနေသည်။ ရမ္မက်သွေးတွေ ပူနွေးပြည့်လျှံနေပြီဖြစ်၍ နီရောင်သမ်းနေသော စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုတွေက ဖောင်းတင်းဖုကြွနေသည်။ ထွန်းထွန်းလက်တစ်ဖက်က နို့တစ်လုံးကို ဖျစ်ညှစ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း ကျန်နို့တစ်လုံးကိုမူ ပါးစပ်ဖြင့် ငုံခဲကိုက်ဆွဲ၍ တပြွတ်ပြွတ် စို့ပါတော့သည်။ မတင်ရီမ၏ ဖောင်းကြွစူပွနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးမှာ စောက်ရည်ကြည်တွေ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကာ စိုရွှဲအိုင်ထွန်းလာ၏။ ရာဂါပိုးတွေ တရွရွတက်လာသည့်အတွက် စောက်ဖုတ်ကြီးတစ်ခုလုံး တလှုပ်လှုပ်တရွရွဖြစ်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက သူ့လက်ခလယ်ဖြင့် မတင်ရီမ၏ စောက်ခေါင်းအတွင်း ထိုးသွင်းကြည့်ရာ စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ ပူနွေးစိုစွတ်သော အတွေ့ကို ခံစားလိုက်ရသည်။
မတင်ရီမကလည်း ပေါင်တံဖွေးဖွေးတုတ်တုတ်ကြီးနှစ်ချောင်းကို အစွမ်းကုန်ကားပေးရင်း ဖင်ဆုံထွားထွားကြီးကို အစွမ်းကုန် မြှောက်ကော့ပင့်ထိုးပေးသည်။ ထွန်းထွန်းစိတ်ထဲ စောက်ဖုတ်ကြီးကို ယက်ပေးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာ၏။ ထို့ကြောင့် ခုတင်အောက်သို့ ဆင်းလိုက်ပြီး မတင်ရီမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ ဝင်ကာ ကြမ်းပေါ် ဒူးထောက်လိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်နှစ်ခြမ်းကို လက်နှင့်အသာဖြဲကြည့်သည်။ နီရဲစိုလက်နေသော အတွင်းသားနုနုတွေကို မြင်လိုက်ရသောအခါ ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ထည့်လိုက်သည်။ ” ရှူး…..ရှလွတ်….ရှလွတ်….ပြွတ်…ပြွတ်….ပြွတ်… ရှလွတ်…ရွှတ်….ပြွတ်…ပြွတ်….” “ အ…အင့်……အင့် အမေ့…ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်…….” မတင်ရီမ နှုတ်ခမ်းလွှာနှစ်ခုမှာ ပွင့်သွားတော့သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်၍ မျက်နှာတစ်ခုလုံး ရှုံ့မဲ့နေသည်။ ထွန်းထွန်းက ခုတင်စောင်းပေါ်တွင် ကားထွက်နေသော ဖင်ဆုံကြီးနှစ်မွှာကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် အုပ်ကိုင်ဆုပ်နယ်ရင်း နီရြဲ့ပဲအာနေသော စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းကြီးထဲသို့ လျှာဖျားထိပ်လေးကို ထိုးကော့ပြီး ကုတ်တင်လိုက်သည်။ မတင်ရီမတစ်ကိုယ်လုံး လျှပ်စစ်အတို့ခံလိုက်ရသလို သွက်သွက်ခါရမ်းပြီး ခါးကြီးကော့တက်သွားသည်..။ “ အ…အား…..အမလေး…အီးဟီး…အင်းအား…..ရှီး..ကျွတ်ကျွတ်… အား…အမေ့…” မျက်လုံးစုံမှိတ်လျှက် အံကိုတင်းတင်းကြိတ်ကာ ငိုသံပါကြီးဖြင့် ညည်းနေပါသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း တဆတ်ဆတ် တုန်နေ၏။ မတင်ရီမ၏ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ လှိုက်ကနဲ လှိုက်ခနဲ ထကြွလာသည့် ကာမဆန္ဒသည် တဖြိုးဖြိုး တဖျင်းဖျင်းနှင့် တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိသော အကြောပေါင်းစုံထဲသို့ ပြန့်နှံ့စိမ့်ဝင်ကုန်သည်။ ထွန်းထွန်းက စောက်ဖုတ်အက်ကွဲကြောင်းထိပ်ရှိ စောက်စိငုတ်ပြူးပြူးကြီးကို ပါးစပ်ဖြင့် စုတ်၍ လျှာဖျားထိပ်ဖြင့် တို့ထိကလိပေးလိုက်သည်။ “ အားလား..လား… အီးဟီး…ဟီး……အီး အင့်… အင်း…ရှီးကျွတ်..ကျွတ်… အမလေး…အီး……အား……” မတင်ရီမတစ်ယောက် ခါးကော့ရင်မော့လာပြီး တစ်ကိုယ်လုံး ပေါက်ကွဲလွင့်စင်ထွက်မတတ် ကောင်းလွန်းလှသော ကာမအရသာ ကြီးကို အီခနဲဆိမ့်ခနဲ ရှိန်းခနဲ ဖိန်းခနဲ ခံစားလိုက်ရပြီး ရမ္မက်ညည်းသံကြီး ပွင့်ကန်လာပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက သူ့လျှာနွေးနွေးကြီးကို စောက်ဖုတ်အခေါင်းထဲသို့ ရောက်အောင်ထိုးသွင်း မွှေနှောက်လိုက်ပြန်သည်။ မတင်ရီမ ဖင်ဆုံကြီးမှာ တရမ်းရမ်းတခါခါဖြင့် မြောက်ကြွကော့တက်လာပြီး ပေါင်တွင်းသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ ကာမဖီလင်တွေ တရှိန်ရှိန် တငြီးငြီး တက်နေပါတော့၏။ “ အား….အား…အမလေး… အမေ့…အီး….အင့်း….အား..ရှီးကျွတ်..ကျွတ်… တော်..တော်ပါတော့ မောင်လေးရယ်… ..အင့်…အမလေး… မမကောင်းလွန်းလို့ သေ ..သေတော့မယ်… အင်း…အင့်…ဟင်း…. ဟင်း….လိုး…လိုး ပါတော့….နော်…” မတင်ရီမက အသဲအသန် တောင်းပန်ရှာ၏။ မတင်ရီမအသံတွေုတုန်ခါလှိုင်းထနေသည်။ ကြာလျှင် သည်းခြေပျက်၍ ရူးသွပ်သွားနိုင်၏။ သည်တော့မှ ထွန်းထွန်းက စောက်ဖုတ်ကြီးကို စိတ်တိုင်းကျ ယက်စုတ် မှုတ်နေရာမှ ရပ်နားလိုက်တော့၏။ သူ့ပါးစပ်ထဲတွင် ချွဲကျိကျိ ..ငံပျပျ စောက်ရည်တွေက ပေလူး ကပ်တွယ်နေသည်။
အားလုံးကို လျှာဖြင့် သိမ်းကျုံး၍ မြိုချလိုက်တော့သည်။ ဒူးထောက်ထိုင်နေရာမှ ထွန်းထွန်း မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်။ အနေအထားပျက်နေသော မတင်ရီမ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးလိုက်သည်။ မတင်ရီမ၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို သူ့ပခုံးပေါ် ချိတ်တင်လိုက်၏။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို စောက်ဖုတ်ကြီးနား တိုးကပ်လိုက်သည်။ ယခုအချိန်ထိ စောက်ဖုတ်နှင့် မတွေ့ရသေးသော လီးတန်ကြီးမှာ ဒေါသူပုန်ထနေသော တောကြီးမြွေဟောက်လို မတ်လျက်မတ်လျက် မာန်ကြွနေ၏။ အပေါ်သို့ ကော့ထိုးတောင်မတ်နေသော လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို လက်နှင့် ဖိနှိပ်ဆုပ်ကိုင်လျှက် အောက်နှုတ်ခမ်းဝသို့ တေ့မြှုတ်လိုက်သည်။ မနေ့ညနေက လိုးစဉ် မတင်ရီမ စောက်ခေါင်းနက်ကြောင်း သတိပြုမိ၏။ လီးသိမ်လီးမွှားမျိုးကို လုံးဝမဖြုံသော စောက်ဖုတ်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဘူတာကအပြန် လှည်းပေါ်မှာလိုးကြစဉ်က အပျိုကြီးသိက္ခာကျမည်စိုး၍လား မသိ..။ စောက်ဖုတ်ကြီးတုန့်ပြန်လှုပ်ရှားမှုမှာ အင်အား မပြင်းထန်လှ..။ ယခုမူ ထိုသို့မဟုတ်တော့..။ မနေ့ညနေကလိုးကြစဉ် အပေးကြမ်း အခံကြမ်းဖြင့် တုန့်ပြန်မှုတွေက အံ့မခန်းလောက်အောင် ရဲတင်းလာသည်။ ထွန်းထွန်းက အိစက်ပူနွေးသော စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းအဝတွင် တေ့မြှုပ်ထားသော သူ့လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးကို ဖောင်းအာရွကြွနေသော စောက်ဖုတ်အခေါင်းကြီးထဲသို့ တစ်ရစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း ဖိသွင်းလိုက်သည်။ “ ဇွိ…ဗြိ….ဗြစ်….ဗျိ…..ဗြစ်……..ဖွစ်…စွိ…ဖွတ်….ဗြစ်…ဗြစ်……..” လီးတန်တုတ်တုတ်ကြီးက တစ်ရစ်ချင်း တစ်ရစ်ချင်း အဆုံးထိ နစ်ဝင်သွားပါသည်။ ဆီးခုံချင်း ကပ်မနေသည့်တိုင် ထွန်းထွန်းလီးထိပ်ဖူးကြီးက သားအိမ်ဝကို တင်းနေအောင် ဖိထောက်ထားပြီး ဖြစ်နေသည်။ ထွန်းထွန်းက ခါးကို အနည်းငယ် ကုန်းလျှက် မတင်ရီမ၏ လက်မောင်နှစ်ဖက်အောက်သို့ သူ့လက်ကို လျှိုသွင်းလိုက်ပြီး ပြည့်ပြည့်တင်းတင်း ပခုံးသားနုနုဝင်းဝင်းကို တင်းနေအောင် ကုတ်ဖက်ဆွဲတွယ်ထားလိုက်သည်။ အပျိုကြီးဟူသော ဂုဏ်ပုဒ်ဖြင့် မတင်ရီမတစ်ယောက် ရွာတွင် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားခဲ့၏။ အသက် ၂၀ လောက်က မစို့မပို့ အလိုးခံရဘူးပြီး မဆိုစလောက် ကာမအရသာကို မထေမဲ့မြင် ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ လီးအရသာကို ထိထိမိမိ ပီပီပြင်ပြင် မခံစားဖူး၍ အပျိုကြီးဟူသော သိက္ခာမာနတွေကို ထွန်းထွန်း၏လီးကြီးအောက်တွင် ခဝါချလိုက်ရပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းအပြုအမူက မီးကုန်ယမ်းကုန် ကြမ်းတော့မည့်ပုံ ဖြစ်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရင်တွေခုန်ပြီး ဖင်ဆုံသားတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်နေပါသည်။ ထွန်းထွန်းက အဆုံးထိနစ်ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော် ပြန်နှုတ်လိုက်သည်။ ထိုစဉ်… “မောင်….မောင်လေး… ဟို..ဟို…..မမခြေထောက်ကို ပြန်ချပေးစမ်းပါ…” ထွန်းထွန်းက မကြားသလိုပုံစံဖြင့် လီးတန်ကြီးကို ပြန်သွင်းပြန်နှုတ် လုပ်နေသည်။ “ ကျစ်…..ကြည့်ပါလား… ခြေထောက် ချပေးပါလို့ ဆိုနေ…..” မတင်ရီမက မျက်စောင်းထိုးရင်း ပြောသည်။ “ ဘာဖြစ်လို့လဲ ….မမရ…” “ အားရပါးရ ခံချင်လို့…ဟေ့….သိပလား…” “ ဟား ဟား… ငါ့မိန်းမ သဘောပါကွာ….” “ အောင်မယ်… ဘာငါ့မိန်းမလဲ….ကဲ…ကဲ….” မတင်ရီမက ထွန်းထွန်း လက်မောင်းကို ဆွဲဆိတ်ရင်းပြော၏။ “ အော်….မမပဲ ခေါက်ဆွဲဆိုင်က တရုတ်မကို ငါ့ယောက်ျားလို့ ပြောခဲ့ပြီး….” “ ကြည့်စမ်း….ကြည့်စမ်း…သူ့မယားကို သတိရနေတာ…..” မနာလိုစိတ်နှင့် ရမ္မက်စိတ်တို့ ရောထွေးကာ မတင်ရီမမှာ ကာမဇောတွေ ပို၍ပို၍ ပြင်းထန် ထကြွလာ၏။
မတင်ရီမက ဒူးနှစ်ဖက်ကို သူမလက်ဖြင့် ဆွဲဖိထားလိုက်သည်။ ထိုအခါ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးမှာ ပြူးအစ်ကန်ထွက်လာပြီး လီးတန်ကြီးကို တင်းနေအောင် ဖိညှစ်ထားသလို ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ပက်ပက်စက်စက် အသားကုန် ကြုံးခံတော့မည့် အနေအထားဖြစ်၏။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ထွန်းထွန်းကို စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတော့သည်။ ကြပ်သပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးထဲမှ ထွန်းထွန်းက သူ့လီးတန်ကြီးကို တစ်ဝက်ကျော်ကျော်မက ပြန်နှုတ်လိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးတွင် ယှက်သိုင်းထားသော အရစ်အရစ်ထနေသည့် အရေပြားထူထူတွေက စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနုနုများကို တွန်းထိုး၍ အရှိန်နှင့်ထွက်လာရသည်ဖြစ်ရာ တစ်ကိုယ်လုံး တဖြိုးဖြိုးတဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားရသည်အထိ ကောင်းလွန်းလှတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက လီးတန်ကြီးကို ပြန်၍နှစ်သွင်းလိုက်သည်။ “ ဇွိ….ဗြစ်….ဗြစ်….ဖွတ်…..ဗြိ…..ဇွစ်……ဗြစ်…….” စောက်ရည်တွေက အိုင်ထွန်းပွက်လန်နေပြီမို့ သံစဉ်တေးလေးက တစ်မျိုးထွက်လာသည်။ လီးကြီးအဆုံးထိ မြုပ်ဝင်သွားသောအခါ တစ်ဝက်ကျော်ကျော် ပြန်နှုတ်၏။ နောက်တစ်ခါ အဆုံးထိ ပြန်သွင်း၏။ တစ်ခါ တစ်ဝက်ကျော်ကျော် ပြန်နှုတ်၏။ ဤသို့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန် အသွင်းအနှုတ် အချက် ၃၀ ကျော်လောက် ပြုလုပ်ပြီးသောအခါ တစ်ရှိန်ထိုး ဆောင့်ဆောင့်လိုးဖို့ အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်သည်။ မတင်ရီမက တစ်ကိုယ်လုံး ငှက်ဖျားတက်လာသလို တဆတ်ဆတ်တုန်ခါလျှက် တဟင်းဟင်း တဟီးဟီး ညည်းညူကာ ထွန်းထွန်းခါးကို တင်းနေအောင် ကုတ်ဖက်ထားလိုက်သည်။ ထို့နောက်တွင်မူ ခပ်မြန်မြန် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်းဆောင့်၍ မနားတမ်း လိုးပါတော့သည်။ ရှီး…ကျွတ်ကျွတ်… အ…အမေ့… အား… အ….အင့်…အမေ့….အ……အမေ့..ဒုတ်…အင့်…..အေ့….အမေ့…..” လီးဝင်လီးထွက် အသွင်းအနှုတ်မှာ တကယ်ပင် အံ့မခန်းလောက်အောင် ကြမ်းရမ်းလွန်းလှသည်။
စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ထုံကျင်အီစိမ့်နေပြီး ဘာကိုမှ ထိန်းချုပ် ဆုတ်ကိုင်မရတော့ဘဲ အာကာဝေဟင် ကောင်းကင်ပြင်ထဲ၌ ထင်သလို လွင့်မျောနေသည့်နှယ် ခံစားနေရသည်။ ကာမအရသာက မီးပွင့်မတတ် ကောင်းလွန်းလှတော့သည်။ အချက်ပေါင်းတစ်ရာကျော်လောက် ဆောင့်လိုးပြီးသောအခါ ထွန်းထွန်းလချောင်းထဲ ယားယံဆိမ့်တက်လာ၏။ တင်းထားသမျှ စိတ်ဓါတ်ကို လျှော့ချလိုက်သည်။ အင့်ခနဲ အင့်ခနဲ တုန်ခါသွားပြီး စောက်ခေါင်းထဲသို့ လရေပူတွေ ဖျင်းခနဲ ဖျင်းခနဲ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။ ပူနွေးသော လရေတွေက စောက်ခေါင်းအတွင်း ပျံ့နှံ့သွားစဉ်မှာပင် မတင်ရီမက အီးခနဲ အသံမြည်ဟီးကာ စောက်ဖုတ်အုံကြီးတစ်ခုလုံး ပွင့်ကန်ထွက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပြီး စောက်ရည်ပူတွေ ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့သည်။ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက်လည်း မတင်ရီမ၏ နို့အုံတင်းတင်းကြီးတွေအပေါ် မျက်နှာမှောက်၍ ပြစ်ခနဲ ပြစ်ခနဲ ထွက်နေသေးသော လက်ကျန်လရေများ ထွက်တိုင်းထွက်တိုင်း အီစိမ့်ရှိန်းဖိန်းသော ကာမအရသာထူးကြီးကို တဝကြီး ခံစားလျှက် ရှိပါတော့သတည်း….။ မတင်ရီမနှင့် နောက်ဆုံး ကာမဆက်ဆံပြီးကတည်းက ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ၄၅ ရက်တိုင်တိုင် မည်သည့်မိန်းမနှင့်မှ ကာမဆက်ဆံခြင်း မပြုတော့ပေ..။ သူ၏ဖွားဖက်တော် မော်တာကြီးကို အနားပေးထားလိုက်သည်။ မကြည်ရှိန်နှင့် မဝင်းခင်တို့မှာလည်း ထွန်းထွန်း လာနိုးလာနိုး နှင့် တိတ်တခိုး မျှော်ကိုးလျက် ရှိကြသည်။ ထိုသို့ ၄၅ ရက်တိုင်တိုင် ကာမဆက်ဆံခြင်းအလုပ်ကို လုံးဝမပြုလုပ်ဘဲနေစဉ် ကာလအတွင်း ပီယမန္တာန်တွေကို တစ်နေ့လျင် အခေါက်ရေပေါင်း ၁၅၀၀ ရအောင် ရွတ်ဆိုလျက်ရှိသည်။ သူ့မိဘတွေကမူ သူတို့သား အဓိဋ္ဌာန် ပုတီး စိပ်နေသည်ဟု ထင်မှတ်ကာ ဂုဏ်ယူဝမ်းသာနေကြ၏။ မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဘွား ထွန်းတောက်မည့်သားဟု အလွန်အမင်း ကျေနပ်နေကြသည်။ နေ့စဉ်မှန်မှန် ကာမအားတိုးဆေးကို စား၍ ကာမအာရုံကြောတွေ စုဝေးပေါင်းဆုံရာ လိင်တန်ကြီးကိုလည်း အကြောသန်ဆေးတွေ နေ့စဉ် လိမ်းပေးသည်။ ဂဝံရုပ်တုကိုလည်း အထူးတင်သထား၏။ မိန်းမတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော သနပ်ခါး၊ ကျောက်ပြင်၊ ဘီး၊ မှန်၊ ရေမွှေး၊ မိတ်ကပ်ပါ မကျန် တင်သထား၏။ မန္တာန်သက်လည်း နေ့စဉ်သွင်းပေး၏။ ၄၅ ရက်မပြည့်မီ တစ်ညအလိုတွင် အိပ်မက်ပေးတော့၏။ အိပ်မက်ထဲတွင် အသားအရေက ကြေးနီရောင်တောက်နေသော ယက္ခဒေဝီတစ်ပါးက သူ့ကို တောနက်ကြီးထဲ ခေါ်သွား၏။
တောနက်ကြီးအလယ်တွင် တစ်ထွာခန့်ရှိ ဆူးပင်ကြီးတွေ ဆူးနက်ခြုံကြီးတွေ ကာရံထားသော ရုက္ခဗိမာန်ခေါ် ဧရာမ သစ်ပင်ခြုံပုတ်ကြီးထဲဝင်ကာ ယက္ခဒေဝီက ကာမဆက်ဆံခိုင်းသည်။ သစ်ပင်ခြုံပုတ်ကြီးက လုံခြုံလှသည်။ အတွင်းအထက်ဝဲယာ ပတ်ပတ်လည်တွင် အနက်ရောင် ကတ္တီပါ အကောင်းစား တွေ မိုးကာထားပြီး အောက်ခြေတွင် သားမွှေးကော်ဇောတွေ ခင်းထားသည်။ ပေ ၄ဝ ပတ်လည်ခန့်လောက်ရှိသည်။ ရတနာ ၇ ပါး စီခြယ်ထားသော ၆ပေ ခန့်ရှိ ရွှေသလွန်ကြီးပေါ်ဝယ် တစ်ထွာကျော်ကျော်ရှိ ကတ္တီပါမွေ့ယာကြီး ခင်းထား၏။ ထိုရွှေသလွန်ကြီးပေါ်ဝယ် ယက္ခဒေဝီနှင့် ထွန်းထွန်းတို့ ကာမဂုဏ် ခံစား၊ မြူးထူး ပျော်ပါးကြသည်။ ၃ ကြိမ် ၃ခါ ဆက်ဆံမြူးထူး ပျော်ပါးပြီးသောအခါ ယက္ခဒေဝီက ထွန်းထွန်းကို သဘောကျ ကျေနပ်လှသဖြင့် ရတနာအိုးများ မြှုပ်နှံထားသော နေရာကို လမ်းညွှန်သည်။ ထွန်းထွန်းတို့ပိုင် ယာမြေတစ်ချို့မှာ တောင်ခြေရင်းအစပ်တွင် ရှိ၏။ ထိုတောင်ခြေရင်းရှိ ယာမြေများထဲမှ သစ်ပုတ်ပင်ကြီး၏ အရှေ့ဘက် ၉ ပေခန့်အကွာတွင် ရတနာအို မြှုပ်နှံထားကြောင်း…။ ထိုရတနာများကို ထုခွဲရောင်းချ၍ ကာမသိဒ္ဓိ စခန်းကို ပြီးမြောက်ပေါက်ရောက်အောင် ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း…။ ယခုလည်း ကာမသိဒ္ဓိ ပထမအဆင့် ပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီ ဖြစ်၍ သူမနှင့် ကာမ ဆက်ဆံခွင့် ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ၏။ ယက္ခဒေဝီ ရုက္ခဗိမာန်ကြီးထဲက သူ့ကိုလိုက်ပို့ချိန်မှာ…ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် အိပ်မက်က လန့်နိုးလာသည်။ ဝတ်ထားသော ပုဆိုး၏ လီးတန်တစ်ဝိုက်နေရာတွင် သုတ်ရေပျစ်ပျစ်တွေက စိုရွှဲစေးကပ်နေပါတော့သည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ ထွက်သောသုတ်သည် ပီယဆေးဖော်စပ်ရာ၌ အသုံးပြုရကြောင်း သိထားသဖြင့် သုတ်ရည်တွေ စိုရွှဲကွက်ထနေသော နေရာကို ကပ်ကြေးဖြင့် ကိုက်ဖြတ်ယူထားလိုက်သည်။ သူအိပ်ရာက နိုးလာချိန်မှာ… နံနက် ၅ နာရီထိုးပြီး မိနစ်လေးဆယ်ခန့်ဖြစ်သည်။ သူ့အမေက မီးဖိုထဲဝင်ကာ ထမင်းချက်နေသည်။ ထမင်းရည်ငှဲ့၍ ထမင်းအိုးကို ဖိုပေါ်မှာ နှပ်ထားချိန် ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်း အိမ်ပေါ်ထပ်က ဆင်းလာခဲ့ပြီး…. “ မေ…မေ……..မေမေ…မေမေ……..” “ လာ…ဘာ…ဘာလဲ သား……..” “ ဖေဖေ နိုးပလား….” “ ဟင့်အင်း… အိပ်နေတုန်း…ဘာဖြစ်လို့လဲ…သားရဲ့… အလန့်တကြားနဲ့…” “ လာပါ..မေမေရဲ့… သားပြောပြပါမယ်…” ထွန်းထွန်းအမေက ထမင်းချက်နေရာမှ ထလိုက်လာသည်။ အိမ်အောက်ထပ် အရှေ့ခန်းထဲတွင် အိပ်ပျော်နေသော သူ့အဖေကို နှိုးပြီး အိပ်မက်အကြောင်း ပြောပြသည်။ နောက်ကပါလာသော သူ့အမေကလည်း ရပ်နားထောင်နေသည်။ “ ဖေဖေ… သားအိပ်မက် မက်တယ်… တောင်ခြေရင်းက သားတို့ပိုင်တဲ့ ယာကွက်ထဲက သစ်ပုတ်ပင်ကြီးရဲ့ အရှေ့ဘက်တည့်တည့် ၉ ပေလောက်အကွာမှာ ရတနာအိုး မြှုပ်ထားတယ်လို့ ယက္ခဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က အိပ်မက်ပေးတယ် ဖေဖေ…။ အဲဒါ… ဖေဖေရော မေမေရော .. လိုက်ခဲ့ကြဗျာ… သွားတူးကြည့်ကြရအောင်…” ငယ်ငယ်ကလည်း အခုလိုကိစ္စမျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့သဖြင့် သူ့မိဘများမှာ ထွန်းထွန်းစကားကို ပျက်ရယ် မပြုရဲကြ..။ တစ်နာရီခန့်ကြာသောအခါ သစ်ပုတ်ပင်ယာကွက်သို့ ရောက်ကြ၏။ သစ်ပုတ်ပင်ရင်းတွင် လှည်းရပ်ပြီး ထွန်းထွန်းတို့ သားအဖနှစ်ယောက် သစ်ပုတ်ပင်ကြီးကနေ အရှေ့ဘက်တည့်တည့် ပေကြိုးဖြင့် တိုင်းကာ ၉ ပေခန့် နေရာတွင် ပေါက်ပြားဖြင့် စတင်တူးကြသည်။ ယာကွက်နှင့် လွတ်သောနေရာမို့ မြေက သိပ်သည်းမာကျောပြီး ခက်ခက်ခဲခဲ တူးကြရသည်။ တစ်ပေခွဲ ကျော်ကျော်ခန့် အရောက်တွင် ပေါက်ပြားက မာကျောသော အရာတစ်ခုကို ချွင်းခနဲ ထိခတ်မိသည်။ သားအဖနှစ်ယောက် အားတက်သွားကြရသည်။
ပေါက်ပြားနှင့် မပေါက်တော့ဘဲ တူရွင်းနှင့် အသေအချာ တူးဆွလိုက်ရာ.. အချင်း ၂ ပေပတ်လည်ရှိ အဖုံးပါသော ကြေးအိုးကြီးတစ်လုံး ပေါ်လာသည်။ အိုးကြီး ပတ်ပတ်လည်ကို တူးဖြိုယက်ဆွ၍ မယူလိုက်သည်။ အိုးကြီးက အတော်လေး အချိန်စီးလွန်းသဖြင့် သားအဖနှစ်ယောက် ခက်ခက်ခဲခဲ မယူရသည်။ “ ဝိုင်းမပါအုံးဟ…မိန်းမရ… အတော်လေးသဟေ့….” သုံးယောက်သား ကြေးအိုးကြီးကို မ၍ လှည်းဆီ သယ်လာကြသည်။ အဖုံးက တော်တော်နှင့် ဖွင့်မရဘဲဖြစ်နေသည်။ ထွန်းထွန်းက စိတ်မရှည်တော့သဖြင့် တူရွင်းပြားနှင့် ထိုးပြီး ကလန့်ချလိုက်ရာ ချွင်ခနဲ အသံမြည်ပြီး ကြေးအိုးကြီး ပွင့်ထွက်သွားတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက ပြေး၍နှိုက်မည်အပြု၊ သူ့အဖေက လက်ကို လှမ်းဆွဲထားသည်။ “ အရမ်းမလုပ်နဲ့ သားရဲ့… အတွင်းမှာ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ သတ္တဝါတွေ ရှိနေတတ်တယ်…” သူ့အဖေက လှည်းပေါ်တွင်ပါလာသော ခက်ရင်းခွဖြင့် အိုးနှုတ်ခမ်းဝကို ထိုးပြီး မြေကြီးပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီးတော့မှ ပြန်လှန်သည်။ ကြေးအိုးထဲ ခက်ရင်းခွ ထိုး လှည့်မွှေကြည့်သည်။ ရွှေတုံးရွှေခဲများနှင့် ဥသျှစ်သီးခန့် ကျောက်ရိုင်း ၃ လုံး ထွက်လာသည်။ ရွှေတုံးရွှေခဲတွေက ဝင်းအိနေသည်။ အနည်းဆုံး အချိန်တစ်ဆယ်လောက် ရှိမည်။ ဘာအကောင်ပလောင်မှ မရှိမှန်း သေချာပြီဆိုတော့မှ ရွှေတုံးရွှေခဲများကို အိုးထဲ ပြန်ထည့်သည်။ လှည်းပေါ်က တောင်းထဲတွင် ကြေးအိုးကြီးထည့်ပြီး အပေါ်က ဂုံနီအိတ်များ အုပ်ကာ လှည်းမောင်း ရွာပြန်ခဲ့ကြသည်။ “ မိန်းမ… မင်းနှုတ် လုံပစေနော်… ကြားလား…” “ သိပါတယ်တော်… ကျုပ်များ အ အမှတ်နေ….” ထွန်းထွန်းအမေက ထွန်းထွန်းကိုဖက်ထားရင်း ပြုံးရွှင်စွာ ပြန်ပြောလိုက်၏။ “ ဟ….ဟေ့ကောင်ကြီးတွေ …သွက်သွက်သွားကြ စမ်း…” ထွန်းထွန်းအဖေက နွားနှစ်ကောင်ကို တံဖျာနှင့် တို့လိုက်ရာ နွားနှစ်ကောင်မှာ ရွာဆီသို့ ဒုန်းစိုင်းလျှက်….။ ဖိုမတို့ရဲ့ သဘာဝကို စူးစမ်းချင်၍ သူ့အဖေနှင့် အမေတို့ အိပ်ပျော်နေစဉ် ည ၁၀ နာရီခန့်လောက် ထွန်းထွန်း အိမ်က ထွက်လာခဲ့သည်။ ခေါင်းစွပ်ပါသော အနွေးထည် အနက်ရောင်နှင့် ဘောင်းဘီအနက်ကို ဝတ်ခဲ့သည်။ ဆောင်းရာသီမို့ တံခါးပိတ်၍ စောစောအိပ်ကုန်ကြပြီ..။ အရက်သောက်သူများမှာ အိမ်ရဲ့ အဖီအောက်မှာ သောက်နေကြသည်။ ထွန်းထွန်းက မရင်မိတို့ အိမ်ထဲသို့ မှောင်ရိပ်ခို ပြီးဝင်လာတော့ အဖီအောက်တွင် ရေနံဆီမီးအိမ် ထွန်းထားသဖြင့် အလင်းရောင်က ခပ်မှိန်မှိန် ခပ်ပျပျသာ လင်းနေသည်။ အဖီအောက်တွင် မရင်မိယောက်ျား ကိုတင်ဦးနှင့် ဦးမြ၊ ဦးထွန်းစိန်တို့ သုံးယောက်သား အရက်သောက်ရင်း စကားပြောနေကြသည်။ ထွန်းထွန်းက အသာကပ်၍ နားထောင်လိုက်သည်။ အသက် ၆၀ ကျော်ဝန်းကျင်ရှိ ဦးမြနှင့် ဦးထွန်းစိန်တို့မှာ မန္တလေး၊ဧရာဝတီ ဆိပ်ကမ်းဝန်းကျင်မှာ ကျက်စားလေ့ရှိသော ဖာအကြောင်းကို ပြောနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုတင်ဦးက တဟဲဟဲသဘောကျရင်း စကားထောက်ပေးသည်။ တစ်ခါ စိန်ပန်း ဂွမ်းရုံဈေးရှိ ဖာအိမ်တစ်အိမ်မှာ ဖာချနေစဉ် ရဲတွေရောက်လာ၍ အပေါက်ကကျော်လွှားပြီး ထွက်ပြေးခဲ့ရပုံကို ဦးထွန်းစိန်က ပြော၏။ ဦးမြကလည်း အားကျမခံ ၃၅ လမ်း၊ ရွှေတံခါးထိပ်တွင် အမြဲတမ်း ကျက်စားလေ့ရှိသော အသက် ၄၀ ခန့်ရှိ ဖာတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောပြနေပြန်သည်။
ထိုဖာသယ်က ခေါင်းမလို..၊ သွားလာနေသော လူများကို အခြေအနေကြည့်၍ ပေါ်တင်ကြီး ဈေးစကားပြောပြီး စာသင်ကျောင်းဘေးရှိ သံလမ်းပေါ်တွင် အလုပ်ဖြစ်ကြကြောင်း၊ တစ်လျှော့ ၃ ကျပ် ပေးရကြောင်း ပြောပြနေ၏။ ထွန်းထွန်း မှောင်ရိပ်ခိုရင်း အရက်ချက်သော တဲဖက်ဆီသို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ အရက်ချက်သော တဲမှာ အိမ်မကြီးနှင့် ပေ ၅၀ ခန့်အကွာ စနေထောင့်ရှိ သက်တမ်းကြာညောင်းလှပြီဖြစ်သော သရက်ပင်နှင့် မန်ကျည်းပင်အုပ်အုပ်ကြီး အောက်မှာ ဖြစ်သည်။ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် အိမ်မကြီးနှင့် ဝေးသောနေရာတွင် ထားပုံရသည်။ ထန်းလက်မိုး မြေစိုက်တဲမို့ ခေါင်အေ၇ှ့တည့်တည့်ကသာ အတွင်းဝင်လို့ရသည်။ တဲက ခေါင်စောက်ဖြစ်ပြီး အမိုးက မြေကြီး ကပ်နေသဖြင့် အတွင်းကို ဘေးက ချောင်းကြည့်ရန် မလွယ်ကူပေ..။ ထို့ကြောင့် တဲခြေရင်း ဘက်သို့ အသာလေး ကပ်လာခဲ့သည်။ စစ်ခြေနင်းကို စီးလာသဖြင့် သူ့ခြေသံက လုံသည်။ ပိုးမွှားအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ပြီး ဖြစ်သည်။ ပို၍သေချာအောင် နဂါးပတ်ကျော့ကွင်းကိုပါ ဆောင်လာခဲ့သေးသည်။ မရင်မိက ကုန်းကုန်းကွကွနှင့် အရက်ပေါင်းအိုးကို မီးထိုးနေသည်။ ထင်းမီးတောက် အရှိန်ကြောင့် အရက်ချက်တဲတွင် ဘာမီးမှ ထွန်းမထား..။ မီးရှိန်မပြတ်အောင် ထိုးနေရသဖြင့် အလင်းရောင်က အလိုလို ရနေပြီး ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် တဲမြောက်ဘက်က ပတ်၍ တဲခြေရင်းဘက်သို့ အသာလေး ကပ်လာသည်။ ထရံပေါက်ကနေ ချောင်းကြည့်လိုက်သည်။ ယောက်ျားတစ်ယောက် သူ့ကို ကျောပေးပြီး အရက်သောက်နေသည်။ မီးအလင်းရောင် ခပ်မှိန်မှိန်မို့ ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသဲကွဲပါ..။ မရင်မိယောက်ျား မဟုတ်တာတော့ သေချာ၏။ ကိုတင်ဦးက ဦးထွန်းစိန်တို့နှင့် လေပန်းနေသည်။ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်တာတော့ သေချာနေပြီ..။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်တော့ ကြည့်ရအုံးမည်..။ ထွန်းထွန်း အူမြူး ကျေနပ်သွား၏။ မရင်မိ ဂျိုးကင်ကို လှမ်းအပေး.. အရက်သောက်နေသော လူက မရင်မိလက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး သူနှင့် ကပ်ထိုင်စေသည်။ ပြီးတော့ မရင်မိကို ဖက်နမ်းသည်။ ဖက်နမ်းရုံမျှမက နို့ကြီးနှစ်လုံးကိုလည်း ဆုတ်ချေပေးပြန်သည်။ နို့တွေကို ဆုတ်ချေလို့အပြီး ထမီအောက်စကို လှန်၍ စောက်ဖုတ်ကို နှိုက်မည် အပြု…။ “ ခဏနေအုံး… ကိုဘညိုရဲ့… ဟိုသေနာကောင်ကြီး မပြန်သေးဘူး..၊ ကိုတင်ဦး အရက်လာယူနေရင် ကွဲခနဲ မိနေဦးမယ်…” ကိုဘညိုက မရင်မိစကားကို အလေးမထားပါ..။ စောက်ဖုတ်ကြီးကိုသာ မိမိရရ နှိုက်ဆွနေပုံရသည်။ “ ဟွန့်………ကြည့်ပါလား…လို့…….” မရင်မိက တဏှာသံချိုချိုနှင့် ပြော၏။ “ အင့်…ဟင့်….ခဏနေပါအုံးဆို…. အို့……ကျွတ်…ကျွတ်…. အား ရှိအောင် ဂျိုးကင်စားထားအုံးနော်…. ကျုပ် မီးထပ်ထိုးလိုက်အုံးမယ်… ” “ အားက ရှိပြီးသား ပါကွ… နင့်ယောက်ျားလိုများ မှတ်နေသလား…ဒီမယ် ကြည့်…” ကိုဘညိုက မရင်မိ လက်ကိုဆွဲ၍ ပေါင်ကြားထဲက တောင်မတ်နေသော သူ့လီးတန်ကြီးဆီ ကပ်ပေးလိုက်သည်။
မရင်မိက တောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို ပုဆိုးပေါ်မှ ဆုပ်ကိုင်၍ ဂွင်းတိုက်သလို သုံးလေးချက် ဆောင့်ပေးသည်။ “ အား…..အ…အ………. သိပ်မလုပ်နဲ့ ကွ… လရေတွေ ပန်းထွက်ကုန်လိမ့်မယ်…” “ ဟွန်း… လီးသာကြီးတာ… လရေလဲ မထိန်းနိုင်ပဲ နဲ့….” “ ဒါမို့..မင်းစောက်ပတ်ကြီးကို ဆွပေးနေရတာပေါ့…” “ အင်းပါ…ဆွ…ဆွ… ပြီး မှ အားရအောင် ဆွ….” ထွန်းထွန်းနှင့် သူတို့မှာ ၂ ပေခန့်မျှသာ ကွာ၏။ ကိုဘညိုက ထိုင်နေလျှက်ကပင် မရင်မိ စောက်ဖုတ်ကြီးကို လက်ညှိုးနှင့် ထိုး၍ အသွင်းအနှုတ် သွက်သွက်ကလေး လုပ်ပေးနေရာ စောက်ရည်တွေက စိုရွှဲအိုင်ထွန်းနေပြီမို့ ပြွတ် ပြွတ် အသံလေးတွေ ခပ်သဲ့သဲ့ ထွက်နေ၏။ မရင်မိလည်း ရမ္မက်ဇောတွေ ထန်လာပုံရသည်။ ပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ဘေးသို့ အနည်းငယ် ကားပေးလိုက်၏။ မရင်မိက ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကြွ၍ကြွ၍ ကွ ကွ ခံရင်း ညည်းသံလေး ထွက်နေ၏။ မရင်မိ ကိုယ်လုံးက ဆူဆူဖြိုးဖြိုး တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးမို့ သွေးသားရော အတွင်းအား ပါ ကောင်းပုံရသည်။ အသက် ၃၀ ကျော်ရုံမျှ ရှိသေးတာမို့ သန်တုန်းမြန်တုန်း ခံလို့အကောင်းဆုံးအရွယ် ဖြစ်သည်။ အလုပ်နဲ့ လက် မပြတ်သူမို့ အထူးလေ့ကျင့်စရာမလိုပဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေသူ ဖြစ်၏။ “ နေ…….နေ အုံး……..တော့…” ကိုဘညိုက စောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လက်ကို ထုတ်လိုက်ပြီး အရက်လက်ကျန်အားလုံးကို တစ်ခါတည်း မော့ချလိုက်သည်။ ဂျိုးကင်ကိုမူ လုံးဝ မထိသေး။ ဂျိုးကင်မှာ စိမ်ရေအိုးတွင် ကပ်ထောင်ထားသည်။ မရင်မိက ကိုဘညိုဘေးတွင် ပက်လက်အိပ်လိုက်ရင်း ဒူးထောင် ပေါင်ကားပေးလိုက်၏။ “ ကဲ…ဒီလောက်တောင် နံ့နေတာ …လုပ်တော့……” “ မိလေးက ခံချင်လာပြီလား….” “ အို…..တော်က ဒီလောက်တောင် နှိုက်ဆွနေမှတော့ ခံချင်လာပြီပေါ့ တော့…” ကိုဘညိုက မရင်မိကို မိလေး ဟု ခေါ်လိုက်သဖြင့် ထွန်းထွန်း ရယ်ချင်သွား၏။ ကိုဘညို ပုဆိုးကို ပစ်လှန်၍ မရင်မိပေါင်ကြီးနှစ်ချောင်းကြားတွင် ဒူးထောက်လိုက်သည်။ သူ့လီးကြီးကို လက်နှင့်ကိုင်၍ စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြီး မရင်မိကိုယ်ပေါ် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခွထောက်လျှက် တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်ပါတော့သည်။ ဆောင့်ချက်တွေက သိပ်မပြင်းထန်ပဲ ခပ်မှန်မှန်လေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ “ ဖွတ်….ဖွတ်….ပြွတ်…..စွပ်……ဖပ်….ဖပ်………..” ထွန်းထွန်းတစ်ယောက် ချောင်းကြည့်နေရင်းက လီးကြီး မတ်ထောင်လာသည်။ စိတ်တွေကလည်း ထကြွလာ၏။ လီးက ဘောင်းဘီကို ထိုး၍ထိုး၍ ထွက်ပေါက်ရှာနေသည်။ “ အမလေး….အား…….အင့်….အမလေး…ကျွတ် ကျွတ်… ကောင်းလိုက်တာ ဆောင့် ဆောင့်… အင်း…အင့်…..ဟုတ်ပီ….အား…….” ထိုစဉ်… ဟေ့ ရင်မိရေ… တစ်လုံး ယူခဲ့အုံးဟေ့…. ဟူသော မရင်မိယောက်ျား ကိုတင်ဦးအသံကြားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ကုန်းကုန်းကွကွနှင့် ဆောင့်လိုးနေသော ကိုဘညိုမှာ သူ့လီးကြီးကို ဗြုန်းခနဲ ဆွဲနှုတ်လိုက်သည်။ ကိုဘညိုက ထိုင်လျှက်ကပင် ပုဆိုးကို ခပ်တင်းတင်းဝတ်လျှက် တဲအမိုးအောက်က ငုံ့ထွက်သွားပါတော့သည်။ မရင်မိလည်း ကပျာကယာ ထလျှက် ကိုဘညိုသောက်ထားသော ပုလင်းကို ဆွဲယူပြီး အရက်အိုးဆီ သွားမည်အပြု….. “ ဟော တော့……..” မြေကြီးပေါ်တွင် ပုံကျနေသော သူ့ထမီကို ကမန်းကတန်း ကောက်ဝတ်လိုက်ရပါတော့သည်။ အော်……….လောက…လောက…. တယ်လဲ ရီရပါလား နော်…. ဟု ထွန်းထွန်းတစ်ယောက်ထဲ ကျိတ်ပြုံးနေမိပါတော့သည်..ပြီး။